အော်စကာဆု ရရှိခဲ့တဲ့ “Period. End Of Sentence” ရုပ်ရှင်
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အခြေတည်ပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ “Period. End Of Sentence” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့က အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အော်စကာဆုပေးပွဲမှာ အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဆု ရရှိခဲ့ပါတယ်။
Netflix ရိုက်ကူးထားတဲ့ အဲဒီဇာတ်ကားဟာ အိန္ဒယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းက ရွာတရွာမှာ အခြေတည် ရိုက်ကူးခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်မှုတွေ များပြီး ဒီလို ကိစ္စတွေကို ပြောဆိုခဲ့တဲ့ နိုင်ငံအကြောင်း ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်လို့ ဝေဖန်မှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ အာရှတိုက်တောင်ပိုင်းမှာ အမျိုးသမီးတွေဟာ ဓမ္မတာလာတဲ့ ကိစ္စကို ရှက်စရာလို့ ထင်မြင်နေကြဆဲပါပဲ။
အိန္ဒိယ အမျိုးသမီးတွေဟာ ဓမ္မတာလာနေတဲ့ အချိန်မှာ နတ်ကွန်းသွားခွင့်ကစပြီး အစားအသောက်၊ အိမ်သာသုံးစွဲခွင့် စတာတွေကိုပါ ကန့်သတ်ခံထားရတာကြောင့် ကျောင်းသွားဖိ့ု၊ အလုပ်သွားဖို့ စတာတွေမှာ အခက်အခဲတွေ အများကြီးကို ရင်ဆိုင်နေတယ်လို့ ဆရာဝန်တွေက ဆိုပါတယ်။
“ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်က အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ မကောင်းတဲ့ဘက်ကို ရိုက်ပြထားတယ်ဆိုပေမယ့် ဓမ္မတာလာတဲ့ ကိစ္စကို ထဲထဲဝင်ဝင် ဆွေးနွေးမှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သာမန်ဖြစ်စဉ်တွေကို တိုးတိုးသာသာဖြေရှင်းနေရတယ်”လို့ ဒေလီအခြေစိုက် Sachhi Saheli လို့ ခေါ်တဲ့ ဓမ္မတာကျန်းမာရေး ကူညီမှုအဖွဲ့အစည်းကို တည်ထောင်သူ Surbhi Singh က ပြောပါတယ်။
ကျေးလက်နေ ပြည်သူတွေဟာ ကျန်းမာရေး အသိအမြင် နည်းပါးတာကြောင့် ဓမ္မတာလာတဲ့ အချိန်မှာ လစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုခြင်းထက် အဝတ်စုတ်တွေကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေလည်း မြင့်တက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒီပြဿနာတွေဟာ နီပေါနိုင်ငံမှာ ပိုမိုဆိုးဝါးပြီး ဟိန္ဒူရိုးရာ အယူအဆအရ ရာသီလာတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို အိမ်ထဲကနေ မောင်းထုတ်ထားပြီး တင်းကုပ်တွေမှာသာ နေခိုင်းလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီလို အကာအကွယ်မဲ့တဲ့ နေရာတွေမှာ နေထိုင်ရတာကြောင့် တိရစ္ဆာန်များရဲ့ အန္တရာယ်ပြုခြင်းတွေကို ခံရလေ့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် မရိုက်ကူးခင် တလအလိုမှာ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးတဦးဟာ တဲမှာအိပ်ရင်း သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ သေဆုံးမှုဟာ အဲဒီလမှာ ၄ ယောက်မြောက်ဖြစ်ပြီး အားလုံးဟာ ဓမ္မတာလာစဉ် သေဆုံးခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အော်စကာဆုကို ရရှိခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဟာ ၂၆ မိနစ် ကြာပြီး ဒါရိုက်တာ Rayka Zehtabchi ရိုက်ကူးကာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ Uttar Pradesh ပြည်နယ်က အသေးစားအမျိုးသမီး လစဉ်သုံးပစ္စည်းများကို ထုတ်လုပ်နေတဲ့ အမျိုးသမီး Guneet Monga က ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးလစဉ်သုံးပစ္စည်း ထုတ်စက်ကို သူမရဲ့ ရွာမှာ စတင်ထားရှိပြီး နောက်ပိုင်း သူမဟာ ကိုယ်ပိုင် အမျိုးသမီး လစဉ်သုံးပစ္စည်းကို ထုတ်လုပ်ဖို့ စိတ်ကူး ရရှိခဲ့တာပါ။ သူမဟာ Arunachalam Muruganantham လို့ အမည်ရတဲ့ အမျိုးသားရဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုကို ယူပြီး ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်တခု ထုတ်လုပ်ခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Arunachalam Muruganantham ကိုတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ “Pad Man” လို့ သိကြပြီး သူ့အကြောင်း ရုပ်ရှင်ကိုလည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး မင်းသား Akshay Kumar က ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
“အခုတော့ တကမ္ဘာလုံးက ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို မြင်တွေ့နိုင်ပါပြီ။ ဒီမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကြောင့် ဓမ္မတာအကြောင်းနဲ့ တကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှုအကြောင်းကို လူတွေ ပိုမိုသိလာမှာပါ” လို့ Arunachalam Muruganantham က ပြောပါတယ်။
Ref : Thomson Reuters Foundation
Topics: ဓမ္မတာ, မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်, အော်စကာ